ILogitech iphehlelela iMK850, iMouse eNtsha kunye neKhibhodi yeCombo eyonyusa ukuvelisa kunye nokuthuthuzela emsebenzini | Iindaba zeGajethi
I-Logitech isungula i-MK850, imouse entsha kunye ne-keyboard combo eyonyusa imveliso kunye nentuthuzelo emsebenzini
UAlfonso De Frutos | | ngokubanzi
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndikuxelele malunga neLogitech M330 Silence Plus, imouse endishiye ndiziva kamnandi kakhulu emva kokuzama. Ngoku ndifuna ukukuxelela ngenye yemveliso yomenzi waseSwitzerland: I-Logitech MK850 yokuSebenza kweKhibhodi engenazingcingo kunye neMouse Combo, ikhibhodi epheleleyo kunye nokuseta imouse ebonisa isundu esineentambo kunye nenkxaso yesihlahla, ukuqinisekisa intuthuzelo emva kokusetyenziswa ixesha elide.
ILogitech MK850 ilungiselelwe ngokucacileyo imeko yomsebenzi, apho uchitha iiyure kunye neeyure usebenza. Enkosi kuyilo lwayo ngononophelo, Ikhibhodi entsha yeLogitech kunye nokuseta imouse kwenza amava okuchwetheza abe mnandi ngakumbi.
1 ILogitech MK850 inenkxaso edibeneyo yokuphumla ezintendeni kunye nezihlahla
2 Igalari yeMifanekiso yeLogitech K850
ILogitech MK850 inenkxaso edibeneyo yokuphumla ezintendeni kunye nezihlahla
"Intuthuzelo eofisini ibalulekile, ngakumbi ukuba unokuninzi ekufuneka ukwenzile", uchaza Ubugcisa O gnimh, Umlawuli wekhibhodi eLogitech ngamazwe ngamazwe. Nokuba iphanda, iyila, okanye iyanxibelelana, imveliso yemihla ngemihla ifuna ukulungiswa ukufikelela kumandla ayo apheleleyo. Ikhibhodi engenacingo ye-MK850 kunye ne-combo combo inika umsebenzisi ulawulo olupheleleyo ukuze bakwazi ukuchwetheza ukuya kwizixhobo ezintathu kwaye batshintshe ngokulula phakathi kwabo ukwenza umsebenzi.
Kwaye oko ikhibhodi ibanzi kwaye igqibelele, Ngezitshixo ezenzelwe ukukhokela nokunceda iminwe ngexesha lokusetyenziswa. Ukongeza, isibiyeli esisezantsi esinephedi siyayixhasa ngokupheleleyo isihlahla, ngelixa isakhelo esingqokelelweyo senza imeko yokuchwetheza kwendalo kunye nokukhululeka. Okokugqibela, imilenze ethambekileyo kunye nohlengahlengiso ivumela ii-angles ezahlukeneyo zokubhala, ukuze zilungele umsebenzisi ngamnye.
Ngokubhekiselele kwimouse, uyilo lwayo lubalwa kwimilimitha Kuba isixhobo silingana kakuhle entendeni yesandla, ukongeza ekubeni nevili lokuhamba ngesantya esiphezulu ukuququzelela ukuhambisa amaxwebhu okanye amaphepha ewebhu.
Ikhibhodi yeLogitech MK850 yeOfisi kunye neMouse Set inomsebenzi weLogitech DuoLink. Obu buchwephesha bunikezela ngegundane kunye nokusebenza kwebhodibhodi kuba zinolungelelwaniso lokwenyani olusebenza kunye kunye nokwandisa uthotho lwezinto ezinje, umzekelo, ngokutshintsha ngokulula phakathi kweidesktops ngothotho lwezenzo kunye nokuthambeka esiza kukwenza ngemouse ngokubamba phantsi Fn iqhosha kwikhibhodi.
Okokugqibela, qaphela ukuba zombini ikhibhodi kunye nempuku zinobuchwephesha Utshintsho olulula evumela ukuba utshintshe ngokukhawuleza kwaye ngokulula phakathi kwezixhobo zonxibelelwano ezahlukeneyo ngokucinezela iqhosha. Ikhibhodi iyahambelana neWindows, Mac kunye neenkqubo zokusebenza kwe-Chrome OS kuba inonxibelelwano oluqhelekileyo olungiselelwe ii-OS ezininzi eziqonda izitshixo kunye neendlela ezimfutshane zale nkqubo. Ewe, iLogitech K850 iyahambelana nezixhobo ze-Android kunye ne-IOS enkosi kunxibelelwano lwayo lwe-USB yeBluetooth.
ILogitech iqinisekisile ukuba ikhithi epheleleyo Iya kuxabisa i-euro ezingama-119 kwaye sele ikhona ukuthengwa kwiwebhusayithi yomenzi.
Igalari yeMifanekiso yeLogitech K850
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Logitech isungula i-MK850, imouse entsha kunye ne-keyboard combo eyonyusa imveliso kunye nentuthuzelo emsebenzini
IFirefox 51 ifika neendaba ezibalulekileyo malunga nokusebenza
Imiba yebhetri ye-iphone engalungisekanga ngohlaziyo lwamva nje lwe-iOS